Deegaanka Godod ee Mudug oo maanta lagu dagaalamay iyo nabbadoono baaq diray (Dhegeyso) – Radio Daljir
Deegaanka Godod ee Mudug oo maanta lagu dagaalamay iyo nabbadoono baaq diray (Dhegeyso)
Nofeembar 4, 2013 4:54 b 0
Galkacayo, November 4, 2013 – Deegaanka Godod ee gobolka Mudug ayaa mar kale waxaa maanta laga soo sheegayaa in uu halkaas ka dhacay dagaal u dhexeeyo beelo horay ugu dagaalamay deegaanka toddobaadkii hore, xiisada ayaa weli ka aloosan deegaanka.
Saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Mudug ee Puntland iyo odoyaal ka kala tirsan dhinacyada Galmudug iyo Puntland ayaa xaqiijiyey jiritaanka dagaalka maanta dhacay, in kastoo aan la sheegin tirada rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Nabadoon Cabdi diiriye Guunyo oo ka mid ah waxgaradka gobolka Mudug ee Puntland ayaa sheegay in ay ka war-heleen xiisada ka jirta deegaanka Godod, waxaa uu ku baaqay nabad isagoo sheegay in aysan ka daali doonin xasilinta deegaanka iyo joojinita dagaalka u dhexeeya beelaha.
Khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa la soo sheegayaa in uu ka dhashay dagaalka, balse ilaa hadda lama hayo xog dhamaystirsan.
Docda kale Xuseen Aw-cali oo ka mid ah odoyaasha koonfurta Galkacayo oo isna la hadlay idaacada Daljir, waxaa uu ku baaqay in la helo xasilooni buuxda lana joojiyo dagaalka laga soo sheegayo deegaanka Godod ee gobolka Mudug.
Xuseen Aw-cali waxaa uu maamuladda Galmudug iyo Puntland uga digay in ay ku cel-celiyaan hadallada colaada sii hurin kara sida uu ku sheegay waraysiga, dhamaadkii toddobaadkii hore ayaa dagaal khasaare badan dhaliyey waxaa uu ka dhacay isla deegaanka Goddod in kastoo uu dib ka qaboobay.
Dhegeyso: Nabadoon Cabdi diiriye Guunyo oo u waramay Cabdirisaaq Silver oo daljir ka tirsan.
Shakiib dhawre ?midaynta ciidamada jooga Jubbooyinka ayaa shirka looga hadlayaa maanta? (Maqal)
Ghana oo beenisay in ciidamo boolis ah oo ka socda dalkeeda ay ku jiraan howl-galka AMISOM